UMashape Udibanisa abaPhuhlisi kunye neeAPI | Martech Zone
UMashape Udibanisa abaPhuhlisi kunye neeAPIs
NgeCawa, ngoMatshi 2, 2014 Douglas Karr
Elona xesha lide, i-goto yam yokufumana ii-API yayi Inkqubo yeWebhu -Kodwa inokuba itshintshile emva kokuyifunda UMashape. IMashape ayisiyonto ilula yokukhangela yeAPIs, iyadibanisa API ngqo kwindawo yabo yokugcina. Oku kwenza ukuba ubhalise, ufumane kwaye uvavanye ifayile ye- API ngaphandle kobunzima nakanye.
Nalu uluhlu lwabo lwezibonelelo kunye neempawu:
Yonke into kwindawo enye - ujonge amaqela eeAPIs ukuze ukhethe, ukhethe, kwaye uthelekise ii-API kwindawo enye.
Isiqinisekiso esinye -UMashape ukubonelela ngesiqinisekiso sokufikelela kuzo zonke iiAPIs ezisetyenzisiweyo kwizicelo zakho.
Nxibelelana nabaphuhlisi -Imiyalezo eyakhelweyo kunye nenkqubo yokufaka ingxaki ekunikezelweni kwetikiti ukulungiselela unxibelelwano phakathi kwabaphuhlisi
Zama Phambi kokuba ube neKhowudi - idityanisiwe API amaxwebhu kunye novavanyo lwekhonsoli zikuvumela ukuba ube namava API ngaphandle kokuzibophelela.
umkhondo API lokusebenzisa - kubunzulu kubahlalutyi, iingxelo, iimpazamo, kunye nokusetyenziswa kokubhaliswa kwee-API zakho ezininzi kwindawo enye.
Amathala eencwadi aBathengi abaninzi -Ukhethe ulwimi lwenkqubo kwaye ulahle ithala leencwadi kwiprojekthi yakho.
Ukuhanjiswa kwangoko -Upapashe uluntu lwakho API kwaye iyafumaneka kumawaka abaphuhlisi abasebenzayo. Unokongeza indawo yabucala API kwaye usebenze ngokubambisana ngaphakathi kwintlangano yakho.
ngokukhawuleza API Umhleli woXwebhu -Yila okanye uhlele amaxwebhu akho abucala okanye esidlangalaleni, okwenza abaphuhlisi baqonde ngokukhawuleza kwaye basebenzise i-API yakho.
Imiba Yoluntu -Yila, uphawule, kwaye ulandele API khupha ingxelo yeebugs okanye ukungasebenzi kakuhle.
Yenza ngokulula ii-APIs -Nikezela ngeendlela zokukhuphela intengiso yoluntu okanye yabucala. Ucacisa zonke iiparameter zamaxabiso, ezinje ngeefowuni okanye izinto ezizodwa; kunye nokukwazi ukwenza izicwangciso ezininzi kunye neeseti zento.
Isimo se-API kunye neSaziso -Jonga imeko ye-API, kubandakanya umndilili wokuhamba kunye nepesenti yexesha lokugqibela. Sithumela izaziso ngemiba kunye nohlaziyo lokusebenza.
Uhlalutyo loLawulo - inani le API iminxeba, inqanaba lokwamkelwa kwabaphuhlisi abasebenzisa i-API yakho, kunye nenani leempazamo.
tags: Apiapisisinxulumanisi senkqubo yekhompyuthakhangela api
Inkulu kangakanani iTumblr?